शिक्षामा बजेट : वैकल्पिक शिक्षण विधि विकासलाइ प्राथमिकता दिउँ – Tannerivoice
शिक्षामा बजेट : वैकल्पिक शिक्षण विधि विकासलाइ प्राथमिकता दिउँ
प्रकाशित मितिः २३ जेष्ठ २०७८, आईतवार २३ जेष्ठ २०७८, आईतवार
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि बजेट आगामी असार १ गते ल्याउँदै छ । विगतदेखि नै शैक्षिक क्षेत्रमा कमजोर रहेको कर्णाली प्रदेश हाल कोरोना महामारीका कारण गरिएको निषेधाज्ञा र लकडाउनका कारण अझै कमजोर बनेको छ । निषेधाज्ञा लकडाउनको अवधिमा प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर बाहेक कर्णाली प्रदेशका अन्य भूभागहरूमा अनलाइन कक्षा समेत सञ्चालन हुन सकेनन् । यसको मुख्य समस्या थियो विद्यालय तथा विद्यार्थीहरूको इन्टरनेटको पहुँचमा नहुनु । यति मात्र होइन इन्टरनेटको सहज पहुँच नहुनाले अन्य समयमा पनि विद्यार्थी तथा शिक्षकहरूलाई शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सहज हुन सकेको छैन । कर्णाली प्रदेश सरकारको स्थापना भएदेखि नै प्रदेश सरकारको बजेटमा शिक्षा क्षेत्रलाई धेरै प्राथमिकता नदिएको आरोप सरोकारवालाहरूले लगाउँदै आएका छन् । यसर्थ आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्णाली प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी समेट्न सक्छ ? शिक्षा क्षेत्रमा कस्ता बजेट तथा कार्यक्रमहरू आवश्यक छन् ? यी प्रश्नहरू हामीले कर्णाली प्रदेशका शिक्षा क्षेत्रका सम्बन्धित विज्ञ एवं जानकारहरू सँग राखेका छौँ । कर्णाली प्रदेश सरकार को आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि नागरिक स्तरबाट सुझाव दिनका लागि कर्णाली प्रदेशमा जबाफदेहिता खोजिरहेको युवाहरूको साझा मञ्च तन्नेरी चासो सुर्खेत र कर्णाली प्रदेशको थिंक ट्याङ्क ऋति फाउण्डेशनसँगको सहकार्यमा हामीले ‘भ्वाइसेस फर बजेट’ स्तम्भ सुरु गरेका छौँ । यो स्तम्भको पाँचौं श्रृंखला हो । यो शृङ्खला कर्णाली प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षा क्षेत्र कसरी समेटिनुपर्छ भन्ने विषयवस्तुसँग सम्बन्धित छ ।
कमलेश डिसी सहायक डीन, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय
‘वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ विधि पनि विकास गराैँ’
प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षाको गुणस्तर बढाउने कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ । सँगसँगै शैक्षिक संस्थाहरूको पूर्वाधार विकासमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । शैक्षिक जनशक्तिहरुलाई तालिमसहित प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ ।
उनीहरुलाई शिक्षण सिकाइ गर्नका लागि योग्य बनाउनुपर्छ । सहज रूपमा सबै विद्यालयहरूमा आवश्यक पाठ्यक्रमहरू अनिवार्य रुपमा समयमै पुराउनुपर्छ ।
प्रदेशका सबै विद्यालयहरूमा वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ विधि पनि विकास गर्नुपर्छ । त्यसको लागि अहिलेको अवस्थामा सरकारले शैक्षिक संस्थाहरूलाई केही बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
जीतबहादुर शाह, प्रमुख, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, कर्णाली प्रदेश
‘अभिभावकहरूको चेतना जगाउने क्रियाकलापहरूमा बजेट विनियोजन आवश्यक’
कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कक्षाकोठाभित्र विद्यार्थीहरूलाई शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप प्रभावकारी बनाउने किसिमको ल्याउनुपर्छ । एउटा शिक्षकले विद्यार्थीलाई गराउन कक्षाकोठामा गइसकेपछि उसले प्रयाप्त शिक्षण सामग्री पाओस्, सिकाइलाई सहजीकरण गर्न को लागि उसमा उत्साह जाँगर आउने वातावरण सिर्जना होस्, त्यो तरिकाले बजेट ल्याउन आवश्यक छ ।
अहिले अनलाइन अध्यापनको कुरा छ । इन्टरनेटका कुराहरू छन् । धेरै विद्यालयहरूमा वाई फाइ इन्टरनेट तथा कम्प्युटरहरू छैनन् । यी कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्नसक्ने गरी बजेट विनियोजन गर्न जरुरी देखिन्छ । कक्षा १२ को परीक्षा प्रश्न पत्र अहिले कतिपय विद्यालयहरू विद्यालयकै ल्यापटप कम्प्युटरबाट निकाल्न सक्षम छैनन् । कर्णाली प्रदेशमा करिब २४० वटा उच्च माध्यमिक तह सञ्चालन भएका विद्यालयहरू छन् तर त्यसमध्ये करिब ९० वटा विद्यालयले मात्रै कम्प्युटरबाट प्रश्न पत्र निकाल्न सक्षम भएका थिए । त्यस कारण इन्टरनेट लगायतका सामग्री जडानमा पनि बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक छ । कर्णाली प्रदेशका कतिपय माध्यमिक शिक्षा सञ्चालन भएका विद्यालयहरूमा थोरै विद्यार्थीहरू छन्, त्यो कारणले विद्यालय सञ्चालन हुन नसकेमा कि त विद्यार्थीले पढाई छोड्नुपर्ने हुन्छ नत्र भने टाढा जान समस्या छ । त्यसैले विद्यालयहरूमा होस्टेलको सुविधा हुने गरी बजेट विनियोजन गर्न जरुरी देखिन्छ ।
कर्णाली प्रदेशका पाँच वटा जिल्ला पूर्ण साक्षर घोषणा भएका छैनन् । त्यसैले साक्षरताको क्षेत्रमा पनि लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका साथै अभिभावक कमजोर भए भने विद्यालयमा शिक्षकहरूले जतिसुकै काम गरे पनि अभिभावकले महत्त्व दिएनन् अथवा कुरा बुझेनन् भने र त्यो शिक्षक ठिक शिक्षक बेठीक भन्ने चिनेनन् भने शिक्षकहरूमा उत्साह आउँदैन । त्यसैले अभिभावकहरूको चेतना जगाउने क्रियाकलापहरूमा पनि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारमा हामीले धेरै लगानी गर्याैँ । कतिपय स्थानमा पूर्वाधार नै छैन भने त लगानी गर्नु पर्‍यो । तर पूर्वाधार मात्रै सबै कुराको समाधान रहेनछ । हाम्रा गौतमबद्धले पनि रुखमुनि शिक्षा लिएका हुन् । कतिपय स्थानमा त राम्रा अभिभावक राम्रा विद्यार्थी र राम्रा शिक्षक छन् भने पूर्वाधार सहज नभए पनि राम्रो शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप हुँदो रहेछ । यसको मतलब आवश्यक भौतिक पूर्वाधार त हुनुपर्छ नै । कक्षाकोठा भित्रको शिक्षण सिकाई क्रियाकलापलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि असल शिक्षकलाई प्रोत्साहन र पुरस्कृत कसरी गर्ने तथा खराब शिक्षकलाई दण्ड सजायका कुराहरू कसरी गर्ने भन्ने कुरामा बजेट केही बोल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
श्री मंगलगढी आधारभूत विद्यालय वीरेन्द्रनगर सुर्खेत
‘सबै तहका शिक्षकहरूलाई प्रोत्साहन’
कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्यालयहरूलाई प्रविधि मैत्री बनाउनु पर्छ । त्यसको लागि बजेट तथा विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्छ । त्यो सँगै शिक्षकहरूलाई पनि प्रविधिको प्रयोग गर्नका लागि सक्षम बनाउन तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कर्णाली प्रदेशमा शैक्षिक गुणस्तर कम भएको कारणले शैक्षिक उपलब्धि पनि कम छ । प्रदेश बजेटमार्फत त्यसलाई समाधान गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । विद्यालयहरूलाई सहयोग हुने खालका भौतिक पूर्वाधार शिक्षक तालिम तथा सहज रूपमा शैक्षिक सामग्रीको उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले सार्वजनिक शिक्षामा सुधार कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ त्यो मार्फत सार्वजनिक शिक्षामा रहेका समस्याहरूलाई निराकरण गर्नुपर्छ । कर्णाली प्रदेशलाई सकेसम्म छिटो साक्षर घोषणा गर्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्छ । बाल विकास देखि उच्च शिक्षा सम्बन्धी सबै तहका शिक्षकहरूलाई प्रदेश सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।